Vakashela i-USA: Izidingo ezintsha eziqondile zokungena zase-United States
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-USA Izindaba Ezintsha » Vakashela i-USA: Izidingo ezintsha eziqondile zokungena zase-United States
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Vakashela i-USA: Izidingo eziqondile zokungena zase-United States.
Kokubili izakhamizi zase-US kanye nabantu bangaphandle abagonywe ngokugcwele kufanele bahambe nobufakazi besimo sabo sokugoma ukuze banikeze inkampani yabo yezindiza ngaphambi kokuya e-United States.
I-Biden Administration imemezele inqubomgomo entsha yokuhamba ngezindiza yamazwe ngamazwe eqinile, engaguquki emhlabeni wonke, futhi eqondiswa impilo yomphakathi.
Kusukela ngoNovemba 8, abahambi bezindiza bezizwe zakwamanye amazwe abaya e-United States kuzodingeka ukuthi bagonywe ngokuphelele futhi banikeze ubufakazi besimo sokugoma ngaphambi kokugibela indiza ukuze indize iye e-United States,
Abahambi bezindiza abagonywe ngokugcwele bazoqhubeka nokudingeka ukuthi babonise imibhalo yokuhlolwa kwegciwane lengculazi okungenayo ngaphambi kokuhamba kusukela kusampula elithathwe phakathi kwezinsuku ezintathu zohambo oluya e-United States ngaphambi kokugibela.
Kusukela ngoNovemba 8 I-united states ishintsha izimfuneko zokungcebeleka nabahambi bebhizinisi ukuze bangene e-US.
I-the united states UMnyango Wezwe ikhiphe i-COVID-19 Vaccinations and Testing for International Travel imihlahlandlela namuhla.
Kusukela ngoNovemba 8, abahambi bezindiza bezwe langaphandle baya e- I-united states kuyodingeka ukuthi igonywe ngokugcwele futhi inikeze ubufakazi besimo sokugoma ngaphambi kokugibela indiza indize iye e-United States, ngaphandle kwezimo ezilinganiselwe kuphela.
The CDC unqume ukuthi ngezinhloso zokungena I-united states, imithi yokugoma eyamukelwe izobandakanya leyo egunyazwe yi-FDA noma egunyaziwe, kanye nemithi yokugoma enohlu lokusetshenziswa kwezimo eziphuthumayo (EUL) evela ku-World Health Organization (WHO). Bona i-cdc.gov ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.
Abahambi bezindiza abagonywe ngokugcwele bazoqhubeka nokudingeka ukuthi babonise imibhalo yokuhlolwa kwegciwane lengculazi okungenayo ngaphambi kokuhamba kusukela kusampula elithathwe phakathi kwezinsuku ezintathu zohambo oluya e-United States ngaphambi kokugibela. Lokho kufaka phakathi zonke izihambi - izakhamizi zase-US, izakhamizi ezisemthethweni ezisemthethweni (ama-LPR), kanye nezakhamuzi zakwamanye amazwe.
Ukuze kuqhutshekwe nokuqinisa ukuvikela, abahambi abangagonyiwe - kungakhathaliseki ukuthi izakhamuzi zase-US, ama-LPR, noma inani elincane labantu bangaphandle abangagonyiwe - manje bazodinga ukukhombisa imibhalo yokuhlolwa kwegciwane okungenayo isampula ethathwe phakathi nosuku olulodwa lohambo oluya e-United States.
Lobo bufakazi bokugoma kufanele kube yiphepha noma irekhodi ledijithali elikhishwe umthombo osemthethweni futhi kufanele lifake igama lomhambi nosuku lokuzalwa, kanye nomkhiqizo womgomo kanye nedethi yokuphatha yayo yonke imithamo isihambi esiyitholile.
Kubantu bakwamanye amazwe, ubufakazi bokugoma buzodingeka - ngaphandle okulinganiselwe kakhulu - ngaphambi kokuya e-United States.
Nakuba ubufakazi bokugoma bungadingeki ezakhamuzini zase-US kanye nama-LPR, izakhamuzi zase-US ezigonywe ngokugcwele kanye nama-LPR (kanye nabathembele kuzo) zizoqhubeka nokukwazi ukubonisa imibhalo yokuhlolwa kwegciwane elingenayo igciwane elisuka kusampula elithathwe izinsuku ezintathu ngaphambi kokuya e-United States. . Kufanele balethe ubufakazi bokugoma ukuze bafanelekele iwindi lokuhlola lezinsuku ezi-3. Izakhamizi zase-US kanye nama-LPR angakwazi ukukhombisa ukuthi agonywe ngokugcwele kuzodingeka abonise imibhalo yokuhlolwa kwegciwane okungenayo okuthathwe esikhathini esingaphezu kosuku olulodwa ngaphambi kokuhamba.
Ngaphezu kokuqinisekisa ubufakazi bomphumela wokuhlolwa ongenayo ngaphambi kokuhamba - abakwenzile kusukela ngoJanuwari 2021 - izindiza manje zizoqinisekisa isimo sokugoma.
Abagibeli bazodinga ukukhombisa isimo sabo sokugoma, ngerekhodi lephepha, isithombe serekhodi labo lephepha, noma uhlelo lokusebenza lwedijithali.
Izinkampani zezindiza zizodinga:
Qondanisa igama nosuku lokuzalwa ukuze uqinisekise ukuthi umgibeli ungumuntu ofanayo oboniswe ebufakazini bokugoma;
Nquma ukuthi irekhodi likhishwe umthombo osemthethweni (isb., i-ejensi yezempilo yomphakathi, i-ejensi kahulumeni) ezweni lapho umgomo unikezwe khona;
Buyekeza ulwazi olubalulekile ukuze uthole ukuthi umgibeli uyahlangabezana yini nencazelo ye-CDC yokugonywa ngokugcwele njengomkhiqizo wokugoma, inombolo yemithamo yokugoma etholiwe, izinsuku zokuphatha, isiza (isb, umtholampilo wokugoma, indawo yokunakekelwa kwezempilo) yokugoma.
Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-18 ziyakhululwa esimisweni sokugoma kubahambi bezwe langaphandle, uma kubhekwa kokubili ukufaneleka kwezinye izingane ezincane ukugonywa, kanye nokuhlukahluka komhlaba wonke ekufinyeleleni ekugomeni kwezingane ezindala ezifanele ukugonywa.
Abahambi kufanele babonise amadokhumenti omphumela wokuhlolwa ongemuhle we-COVID-19 noma imibhalo yokululama ku-COVID-19 phakathi nezinsuku ezingu-90 ezedlule ngaphambi kokugibela indiza eya e-United States (noma ngaphambi kokugibela indiza yokuqala ochungechungeni lokuxhunywa olubhukwe okufanayo. uhambo oluya e-United States).
Kokubili ukuhlolwa kwe-nucleic acid amplification (NAATs), okufana nokuhlolwa kwe-PCR, nokuhlolwa kwe-antigen kuyafaneleka.
Ukuzihlola kungasetshenziswa uma kuhlangabezana nezimfuneko ze-oda okuhlanganisa ukucutshungulwa kwesikhathi sangempela kwesevisi ye-telehealth ehlobene nomkhiqizi wokuhlola futhi ekhiqiza umphumela wokuhlola ongabuyekezwa inkampani yezindiza ngaphambi kokugibela.
Leli izinga elifanayo lokuhlolwa okufanelekile elisebenzise imfuneko yokuhlola ngaphambi kokuhamba kusukela ngoJanuwari.
Ukuhlolwa kufanele kwenziwe kungakapheli izinsuku ezintathu zekhalenda ngaphambi kosuku lwendiza yamazwe ngamazwe eya e-United States.
Ngakho-ke, uma isihambi siya e-United States ngo-10 PM ngo-January 19, kuzodingeka sethule umphumela wokuhlolwa ongemuhle wohlolo oluthathwe noma nini ngemva kuka-12:01 AM ngo-January 16.
Ngaphambilini, bonke abahambi bekumele babonise umphumela wokuhlolwa ongemuhle phakathi nezinsuku ezintathu zohambo lokuya e-United States.
Kulezo zakhamizi zase-US kanye nama-LPR angakhombisa ukuthi agonywe ngokugcwele, leyo mfuneko ihlala injalo - kufanele babonise amadokhumenti omphumela wokuhlolwa ongemuhle esampula elithathwe zingakapheli izinsuku ezintathu zohambo.
Lokho kusho ukuthi zonke izakhamizi zase-US ezigonywe ngokugcwele kanye nama-LPR ahambela e-United States kufanele alungele ukwethula imibhalo yesimo sazo sokugoma eceleni kwemiphumela yawo yokuhlolwa engemihle.
Lezo zakhamizi zase-US kanye nama-LPR angakwazi ukukhombisa ubufakazi bokugonywa okugcwele manje kuzofanele babonise imibhalo yokuhlolwa okungenayo isampula ethathwe kungakapheli usuku olulodwa ukusuka.
Indlela elula yokugwema ukuhlangabezana nale mfuneko eqinile ukuthi abahambi bagonywe.
Sikholelwa ukuthi iningi labavakashi bamazwe ngamazwe lizobe seligonywe ngokugcwele futhi labo abangakagonywa futhi abafaneleka kufanele bathole ukugonywa ngaphambi kohambo.
Ukuhlola okwenziwe ngaphandle kwe-counter kutholakala kabanzi e-United States, ngakho izakhamizi zase-US ezihambela phesheya zingafika nekhithi yokuhlola ene-proctored lapho zisuka e-US ezingayithatha ngaphambi kokubuyela ekhaya. Futhi siyaqiniseka ukuthi kuzoba khona ukuhlinzekwa okwanele emhlabeni jikelele.
Kodwa-ke, kukhona nenqubo yokuyekelela ekhona esimisweni sokuhlola sangaphambi kokuhamba lapho ukuhlolwa okufanele kungatholakali.